Villa Soomaaliya oo beenisay Warar laga faafiyay Farmaajo - Awdinle Online
Villa Soomaaliya oo beenisay Warar laga faafiyay Farmaajo
Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa beenisay warar ku saabsan in Madaxweyne Farmaajo maalinta berri ah u safri foono Addis Ababa si uu heshiis Amni ula saxiixdo dalalka Itoobiya iyo Eriteeriya.
“Wararka sheegaya in Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu barri safar u yahay ka qeyb galka shir la sheegay in uu ku saabsan yahay heshiis amni oo heer gobol ah waa mid been abuur ah oo aan jirin.” Ayaa lagu yiri Qoraal ka soo baxay Villa Somalia.
Dowladda Federaalku waxay sheegtay in Safarada shaqo ee Madaxweyne Farmaajo ay yihiin kuwa daahfuran oo xogtooda ay si dhammeystiran u soo gudbiyaan Warbaahinta Soomaaliyeed.
“Waxaa nasiib darro ah in Madax xilal muhiim ah ka soo qabtay dalka ay ku jaahwareeriyaan shacabka Soomaaliyeed xog aan sugnayn, iyaga oo uga gol leh dano siyaasadeed oo gaar ah, halka ay ahayd in ay ka soo dhalaalaan waajibaadka Qaran ee horyaallay 4-tii Sano ee la soo dhaafay.” Ayuu sii raaciyay Qoraalkaas.
Previous articleMeydadka laba Ruux oo lagu arkay duleedka Magalada Jowhar
Next articleRW Rooble oo Wakiilada Beesha Caalamka kala hadlay khilaafka doorashada